အကြှနျုပျ၏ Purrfect သူဌေးက! - Boys Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
အကြှနျုပျ၏ Purrfect သူဌေးက! ပျမ်းမျှ 4.3 /5ထဲက 83
49th က 208.9K အမြင်များရှိပါတယ်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, မန်ဟwa, စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း, အသက်တာ၏အချပ်, Smut, နေပြည်တော်, Yaoi
Sunwoo သည်သူ၏အလုပ်သစ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ၀ မ်းသာသည်။ သူသည်စွမ်းအားနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်ရှိသောမန်နေဂျာ Kang ကိုနှစ်သက်စေလိုသည်။ ပြTheနာကသူသည်စကားမပြောနိုင်သောအမှားများကို ဆက်၍ ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူအလုပ်ထွက်ပြီးတစ်ညသူသည်မိမိ၏သူဌေးအပေါ် soju သွန်းလောင်းသည့်အခါအရာများခေါင်းကိုက်သည်။ ပုံမှန်! သို့သော်မန်နေဂျာ Kang သည်အဘယ်ကြောင့်မျက်နှာပျက်နေသနည်း။ ခေါင်းထဲမှထွက်လာသောထိုကြောင်နားရွက်များကားအဘယ်နည်း။ ! သူ၏သူဌေး၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်မကြာမီ Sunwoo ကသူ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့်သုတ်လိမ်းပေးလိုက်သည်။
သင်သည်များစွာသောရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် manga စတိုး
အခန်းကြီး 35 ဧပြီလ 20, 2021
အခန်းကြီး 34 ဧပြီလ 20, 2021
အခန်းကြီး 33 ဧပြီလ 20, 2021
အခန်းကြီး 32 ဧပြီလ 20, 2021
အခန်းကြီး 31 ဧပြီလ 20, 2021
အခန်းကြီး 25 မတ်လ 19, 2021
အခန်းကြီး 24 မတ်လ 19, 2021
အခန်းကြီး 23 မတ်လ 19, 2021
အခန်းကြီး 22 မတ်လ 19, 2021
အခန်းကြီး 21 မတ်လ 19, 2021
အခန်းကြီး 17 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 16 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 15 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး7ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020
အခန်းကြီး6ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020
အခန်းကြီး5ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020
အခန်းကြီး4ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020
အခန်းကြီး3ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020
Seishun Otoko ရန် Denpa Onna